NCHEDO MEGIDE NCHEKWA PHISHING SAỊTỊ WINDOWS DEFENDER PROTECTION - N'IHI BEGINNERS - 2019
Nchedo megide nchekwa phishing saịtị Windows Defender Protection
Ọ bụghị ogologo oge gara aga, edere m banyere otu esi ele saịtị ahụ maka nje, na ụbọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, Microsoft wepụtara ndọtị maka ichedobe saịtị saịtị ọjọọ nke Windows Defender Protection for Google Chrome na ihe nchọgharị ndị ọzọ dabere na Chromium.
Na nkowa nkenke nke ihe mgbakwunye a, ihe nwere ike ịbụ uru ya, ebe ibudata ya na otu esi etinye ya na ihe nchọgharị gị.
Kedu ihe Nchedo Nchọgharị Microsoft Defender
Dịka NSS Labs tests, SmartScreen si na-echebe site phishing na saịtị ndị ọzọ wetara n'ime Microsoft Edge dị irè karịa Google Chrome na Mozilla Firefox. Microsoft na-enye ụkpụrụ omume ndị na-esonụ.
Ugbu a, a na-atụbe nchedo ahụ iji jiri ihe nchọgharị Google Chrome, ọ bụ n'ihi nke a ka ahapụpụtara Mgbatị Nchedo Windows. N'otu oge ahụ, ntinye ọhụrụ ahụ anaghị agbanyụọ ihe nchebe nke ụlọ Chrome, ma mezue ha.
N'ihi ya, mgbatị ọhụrụ ahụ bụ ntinye SmartScreen maka Microsoft Edge, nke nwere ike ịbanye ugbu a na Google Chrome maka nyocha maka saịtị phishing na malware.
Etu ibudata, wụnye ma jiri Nchedo Nchedo Windows
Ịnwere ike ibudata ndọtị ahụ site na weebụsaịtị Microsoft ma ọ bụ na ụlọ ahịa Google Chrome. Enwere m ike ibudata nbudata site na Chrome na ebe nrụọrụ weebụ (ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu maka ngwaahịa Microsoft, ọ ga-adị nchebe maka mgbatị ọzọ).
Mgbakwunye peeji nke na ụlọ ahịa Google Chrome
//browserprotection.microsoft.com/learn.html - Nchedo Nchebe Windows Defender na Microsoft. Iji wụnye, pịa bọtịnụ Wụnye Ugbu a na elu nke ibe ma kwenye iji wụnye ndọtị ọhụrụ.
Enweghị ọtụtụ ihe ị ga-ede banyere iji nchekwa Windows Defender Browser: mgbe echichi, akara ngosi ndọtị ga-apụta na nchịkọta ihe nchọgharị, nke naanị nhọrọ iji mee ma ọ bụ gbanyụọ ya dị.
Enweghị ọkwa ọ bụla ma ọ bụ nke ọzọ, yana asụsụ Russian (ọ bụ ezie na, ebe a ọ dịghị mkpa). Ngbakwunye a kwesịrị igosipụta onwe ya nanị ma ọ bụrụ na ị na-aga na saịtị saịtị ọjọọ ma ọ bụ phishing.
Otú ọ dị, n'ule m maka ụfọdụ ihe kpatara ya, mgbe ị na-amalite akwụkwọ nyocha na demo.smartscreen.msft.net, nke a ga-egbochi, nkwụchi ahụ emeghị, ebe ọ bụ na ha na-egbochi nke ọma na Edge. Ikekwe, ndọtị ahụ etinyeghị nkwado maka ibe ngosi ndị a, mana achọrọ ezigbo adreesị nke saịtị phishing maka nkwenye.
Ka o sina dị, aha Microsoft bụ SmartScreen dị ezigbo mma, ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya na nchekwa Windows Defender Browser ga-adịkwa irè, nzaghachi maka mgbasaba ahụ adịlarị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ọ chọghị ka ihe ọ bụla dị mkpa rụọ ọrụ ma ghara imegiderịta ụzọ ndị ọzọ nke ichebe ihe nchọgharị ahụ.